Tirakoobka Zakada Xoolaha Nool ee 1440-ka Hijriyada Laga qeybiyay Wilaayaadka Islaamiga. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Tirakoobka Zakada Xoolaha Nool ee 1440-ka Hijriyada Laga qeybiyay Wilaayaadka Islaamiga.
On Dec 2, 2018 384 0
Dhamaan wilaayaadka islaamiga ee Soomaaliya, waxaa sanadkan si wanaagsan looga qeybiyay zakada xoolaha nool, taas oo ay ka faa’ideysteen kumanaan qoys oo masaakiin ah.
Sanadkan 1440-ka hijriyada waxaa zakada xoolaha nool laga qeybiyay ugu yaraan 8 wilaayo oo dhaca koonfurta iyo bartamah dalka Soomaaliya, waxaana wadarta guud ee xoolaha la qeybiyay ay gaarayaan 22,451 neef oo isugu jira ari, geel iyo Lo’.
Dadka ka faa’ideystay qeybinta zakada xoolaha nool waxay tiradoodu gaareysaa 6269 qoys, oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo kamid noqday noocyada uu Allaah amray in la siiyo zakada.
Wilaayaadka laga qeybiyay zakada waxay kala yihiin, Shabeellaha hoose, Shabeellaha dhexe, Baay iyo Bakool, Jubbooyinka, Gedo, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug.
Wilaayada Shabeellaha hoose waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 3067 neef, kuwaas oo 2762 kamid ahaa ariga, halka 213 neefna ay ahaayeen geel, 92 neefna waxay ahaayeen Lo’da oo kamid ah xooalaha laga dhaqdo Shabeellaha hoose.
818 qoys ayaa ka faa’ideystay Shabeellaha hoose oo keliya, waxaana qoysaska qaar la siiyay 20 neef oo ari ah, ama hal neef oo geel ah, ama labo neef oo Lo’ ah, waxaana dadku ay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan zakada la siiyay.
Degmooyinka Baraawe, Sablaale, Jannaale, Awdheegle iyo kuwa kaloo badan ayayna ka dhacday qeybinta sakada xoolaha nool.
Baay iyo Bakool ayaa ahayd wilaayada ugu badan ee laga qeybiyay zakada xoolaha nool, tirada xoolaha la qeybiyay waxay gaarayaan 6500 oo neef, 500 oo kamid ah waa Geel, inta soo hartayna waxay ahaayeen Ari.
1700 oo qoys oo muslimiin ah ayaa ka faa’ideystay qeybinta zakada, waxaana deegaannada laga qeybiyay kamid ah Buula-fullaay, Labaatan Jirow iyo kuwa kale.
Wilaayada Jubbooyinka waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 3373 neef, 544 kamid ah waa geel, 464-na waa Lo’, halka 2365 ay ahaayeen ari, waxaana loo qeybiyay 1249 qoys.
Wilaayada Shabeellaha dhexe waxay qeybisay xoolo gaaraya 1339 neef, waxaana dadka loo qeybiyay 217 qoys, 20 kamid ah qoysaskaas waxaa la siiyay min 20 neef.
Wilayaada islaamiga ee Gedo waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 2855 neef, waxaana ka faa’ideystay 1375 qoys, kuwaas oo boqol kamid ah la siiyay 20 neef oo ari ah.
Markaan u imaano wilaayaadka dhaca bartamaha Soomaaliya, Hiiraan waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 2600 oo neef oo ari ah, iyo 150 neef oo geel ah, waxaana loo qeybiyay dad gaaraya 560 qoys, kuwaas oo 36 kamid ah helay min 20 neef oo ari ah.
Deegaannada Hiiraan hoos yimaada ee laga qeybiyay zakada waxaa kamid ah Moqokori, Buq Aqbale, Ceel-cali iyo deegaanno kale.
Wilaayada islaamiga ee Galgaduud oo ahayd wilaayadii ugu horeysay ee sanadkan laga qeybiyo Zakada xoolaha nool waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 2067 neef oo ari ah, waxaana ka faa’ideystay 300 oo qoys, 64 kamid ah qoysaskaasna waxaa la siiyay min 20 neef oo ari ah, iyagoona ballanqaaday iney dhaqan doonaan.
Ugu dambeyn wilaayada islaamiga ee Mudug, waxaa laga qeybiyay xoolo gaaraya 500 oo neef oo ari ah, waxaana ka faa’ideystay 50 qoys oo mid weliba oo kamid ah la siiyay 10 neef oo ari ah.
Deegaannada laga qeybiyay waxaa kamid ah Xarardheere iyo tuulooyinka hoosyimaada, Jowlo iyo deegaannada ku xeeran iyo deegaanno kale.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sanadkii 11-aad oo xiriir ah waxay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka qeybineysaa Zakada kala duwan, iyadoona ay xusid mudantahay in sanadkan wilaayada Banaadir laga qeybiyay lacago zako ah oo gaaraya boqollaal kun oo dollar .